रक्सी धेरै पिएपछि 'ह्याङओभर' किन हुन्छ र कसरी जोगिने ? | Suvadin !
रक्सी धेरै पिएपछि 'ह्याङओभर' किन हुन्छ र कसरी जोगिने ?
Jun 11, 2019 23:43
बेलुका मदिरा पिएपछि टाउको भारी हुन थाल्छ, बान्ता र रिँगटा लाग्‍न थाल्छ। थकाइ अनुभव हुन्छ। मानिसहरू यसलाई धेरै पिएपछि भएको 'ह्याङओभर' हो भन्छन्। हिलसा माछाको अचार खानु, अण्डा खानु वा ओएस्टर खानु, ह्याङओभर हट्छ भन्छन्।
ह्याङओभरबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने समस्या आजको होइन। इजिप्टमा भेटिएको १९०० वर्ष पुरानो एउटा भोजपत्रमा यसबाट मुक्ति पाउने उपाय लेखिएको थियो। अर्थात् उसबेला पनि मानिसहरू रक्सी धेरै पिएपछि त्यसले निम्तिने समस्याबाट हैरान थिए र त्यसको समाधान खोजिरहेका थिए। त्यो भोजपत्रमा जुन उपायहरू सुझाइएको थियो, त्यो आजको दिनमा व्यवहारमा लागु गर्न कठिन छ।
रमाइलो कुरा के छ भने यीमध्ये कुनै पनि उपायले धेरै रक्सी पिएर तपाईँले भोगिरहनु भएको ह्याङओभर समस्याको समाधान गर्ने निश्चित छैन। निश्चित समयपछि यो समस्या आफै हराउँछ। त्यस अर्थमा समयसँगै ह्याङओभर हटेर जान्छ। यसको मुख्य कारण के हो भने आजको दिनसम्म ह्याङओभर किन हुन्छ भन्ने स्पष्ट थाहा भइसकेको छैन।
रक्सी इथानोलबाट बन्छ। यसलाई हाम्रो शरीरमा भएको इन्जाइमले विग्रह गरेर अन्य विभिन्न रसायनमा परिणत गरिदिन्छ। यीमध्यै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एसिटेल्डिहाइड हो। यसलाई थप टुक्रा गरेर इन्जाइमले अर्को रसायन एसिटेटमा परिणत गरिदिन्छ। यही एसिटेट रसायन फ्याटीएसिड र पानीमा परिणत हुन्छ। केही वैज्ञानिकहरू ह्याङओभर यही एसिटेल्डिहाइडका कारण भएको विश्वास गर्छन्। तर केही अध्ययनहरूले यो रसायनको ह्याङओभरसँग प्रस्ट सम्बन्ध नहुने देखाएको छ।
वेरोनिक ग्रीनवुड / बीबीसी फ्यूचरबाट अनुवाद ।